Tsabo-tokana ny fifidianana Filoha
Tsabo-tokana. Olona iray faly, olona manodidina marikivy. Fifidianana Filohan’ny Repoblika : olona iray ihany no ho lany, an’arivony hafa himenomenona, hanendrikendrika, hilahadahatra an-dalambe.
Ivereno vakiana anie ny gazety tamin’ny 2001, volana vitsy nialoha ny fifidianana Filohan’ny Repoblika faramparan’io taona io. Vitsy no nahatsikaritra fa tapa-taona mialoha ny fifidianana sy ny fananganan-tena tetsy Mahamasina ny 22 febroary 2002, no nomasahana tao an-tsain’ny maro ny hoe «Premier Tour dia Vita» (fa tsy mila fihodinana faharoa).
Andaniny, ireo olona vonton’anatra «Premier Tour dia Vita» ireo dia nanjary nino tena nino izany kobaka am-bava izany. Ankilany ihany koa moa ny fitavozavozana sy tandrevaka ary kitoatoa madinika teo amin’ny fandaminana. Manginy fotsiny ny fe-potoana ela loatra namoahana ny voka-pifidianana.
Tsaroana ihany koa tamin’ireny fa nanangana birao manokana mihitsy ny kandidà Marc Ravalomanana : io «Komity miaro ny safidim-bahoaka» io dia niasa tahaka ny Ministeran’ny Ati-Tany mihitsy ka nanangona ihany koa ny voka-pifidianana. Saingy ny azy, navoakany isan’andro, ary haingana kokoa noho ny an’ny sampandraharaham-panjakana. Ankoatra iretsy olona efa vonton’anatra «Premier Tour dia Vita», dia tonga nanatevin-daharana indray ireto olona velon’ahiahy be ihany, gaga na sosotra amin’ny fomba fiasan’ny Ministeram-panjakana.
Iaraha-mahalala fa raha ny alin’iny ihany dia fantatra ny vokatra feno eto Antananarivo-Renivohitra, voatery andrasana herinandro maro vao tafakatra ny voka-pifidianana manerana an’i Madagasikara. Matetika ihany koa, ny mpanohitra hatrany no mandresy eto AndRenivohitra sy amin’ny Tanan-dehibe : ireo anefa no mahatonga voka-pifidianana voalohany, ka ireny voka-pifidianana vonjimaika ireny no voizin’ny gazety sy ny haino aman-jery mandritra ny andro maro : mitarika «lavitra», 75%, amin’ny vokatra 5%, «monja»…
Ankoatra ny vonton’anatra sy ny be ahiahy, miampy indray izany ny «mpanara-baovao» ny laharan’ny «Premier Tour dia Vita». Rehefa ela ny ela, indrindra fa raha mangataka andro loatra ny HCC (nahazo tsiny foana ny HCC) sy ny CENI (mpandova ankehitriny ny ahiahy tsy nihavanana hatrizay), dia maha-henika ny kianjan’ny 13 mey ny isan’ireo…
Mbola tsaroana ihany koa ireo Fanambarana misesisesy navoakan’ny KMF-CNOE, mpanara-maso ny fifidianana, tamin’ireny taona 2001-2002 ireny. Nahagaga, tamin’ny fanambarana faramparany nataony, fa dia sahiny ny nilaza ren-tany ren-danitra hoe «Premier Tour dia Vita» tokoa raha ny 75% ny voka-pifidianana ihany anefa no mbola teo am-pelatanany. Vonton’anatra mialohan’ny fotoana, miampy fatra-piahiahy, miampy «mpanara-baovao», miampy mpanara-maso mitanila, miampy mpanao politika mpandrehitra afo : mira Rotaka.
Tsabo-tokana ny fifidianana Filohan’ny Repoblika. Ahiana anefa fa hisy amin’ireo kandidà ireo, indrindra ireo tsy manana vintana ho lany mandrakizay, tsy hanan-katao afa-tsy ny hitsikera izay voka-pifidianana, na ho inona na ho inona io voka-pifidianana io. Misy mantsy tsy hanaiky mihitsy raha tsy ny azy ihany no lany, ka zarany ho averina indroa, intelo, impolo, ny fifidianana mandra-pivoakan’izay tsabo-tokana maha afa-po azy izay.
Ankoatra ny fampianarana ny fomba fifidianana, tsara raha dieny izao mba mitaiza ny olony avy amin’ny fanajana ny voka-pifidianana ny isan’antoko. Ary mba anjaran’ny mpikarakara isan’ambaratonga ihany kosa ny manala ny anton’ny ahiahy tsy hampihavana : lisi-pifidianana tomombana, isan’ny birao fandatsaham-bato mazava tsara, voka-pifidianana faran’izay haingana. Serasera mangarahara, dieny izao, no fehiny sahady.